साइप्रसमा रहेका सरोज खड्का र कृप थापा भन्छन् यहाँको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ – ताजा समाचार
अहिले विश्व कोरोना भाइरसबाट आतंकित भइरहेको छ। चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरू भएको यो भाइरस हाल चीनमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ भने इटाली अहिले यसको चरम चपेटामा छ। त्यस्तै युरोप, अमेरिका र मध्य पूर्वमा यो तीव्र दरले फैलने क्रममा जारीनै छ ।हाल विश्वभरी फैलिरहेका नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले “कोभिड १९” को नाम दिएको छ र यसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गरिसकिएको छ ।
१२ हजार देखी १३ हजारको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी र कामदार बसिरहेका छौ। आजको मिति सम्म नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरु भौतिक रुपमा केही नोक्सानी नभएपनि यसको सामाजिक र आर्थिक असर पर्न सुरु भए सकेको छ। साइप्रसमा ५६४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने १० जनाको निधन भइसकिको छ र ५३ जना सन्चो भएर घर फर्कि सकेका छ्न तर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन साइप्रस सरकारले प्राय स्कुल, कलेज, सपिङ्ग मल, पसलहरू सिनेमाहल, थिएटर, लाईब्रेरी, क्यासिनो तथा बेटिङ सेन्टर (बाजी लगाउने ठाउँ), पुरातात्त्विक स्थानहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोर, थिम पार्क सङ्ग्रहालयहरू, क्याफे तथा कफी सफ, होटेल र रेस्टुरेन्टर बारहरू अप्रिल ३० सम्म बन्द गरेको छ।
आलेख तयार पार्ने सराेज खड्का
त्यसको मार प्रतक्षरुपमा दिनमा काम गर्ने कामदारहरूलाई पर्न गएको हुदा अवस्था नाजुक देखिएको छ । यस परिस्थितिमा नागरिकको लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको नियमित आपुर्तिको लागि मुख्य र ठूला व्यापारीक केन्द्र ,औषधालयहरु,वित्तीय संस्थाहरु आदि सरकारी सुरक्षाको नियमन र निगरानीमा मात्र खुलेका छन र अधिकांस रोजगारदाता उद्योग व्यवसायहरु अर्को सरकारी सुचना नआउञ्जेलको लागि बन्द छन । कोरोना भाइरसले हाम्रो समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विविध नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । साइप्रसमा पनि केही प्रभाव भइसकेका छन्। कोरोना भाइरसले अत्यावश्यक बस्तुहरु चामल, तेल, दाल जस्ता बस्तुको पहिलो भन्दा महँगो हुँदै गएको छ । साइप्रसमा खाद्यान्न गोदामहरुको बस्तुहरु निकै प्रभाव परेको छ । किनकी समानहरु केही समयको लागि मिति रहेको हुन्छ किनकि लकडाउन भएपछी अत्यावश्यक बस्तुहरु खेर गएरहेको छ। म केही सामान संकलन गर्न जादाँ धेरै कम्पनीको साहुहरुले आ-आफ्नाे दुखेसो फोखेका छन । र अर्को प्रभाव तेल जस्ता बस्तुहरु पनि देखा परेको छ ।एसियन मानिसहरुलाई एकदमै मन पर्ने एक जो स्वबीन जुन बजारमा पाउन छोडिसको छ।
दाङ घर भएकी कार्की भन्छिन् , उनी Sector of Agriculture and Animal Farming मा काम गर्दै आएकी थिएन अहिले कोरोना भाइरसकाे प्रभावले उनको साहुले निकालिदिएको छ । उनीको एक बर्षको भिसा छ तर तर काेराेना भाइरसले काम खाेसिदिएकाे छ । अहिले उनी काम गर्दै आएकी छ महिना भएको थियो । कोरोनाकाे प्रभाव बढ्दै जादा व्यवसाय नै बन्द भएपछि साहुले पनि पैसा दिन नसक्ने भए पछि अहिले उनी साथीभाइ संग बस्दै आएकी छन ।
झापा घर भएकी सोभा भन्छिन् ,उनी साइप्रस कामदार भिसामा आएकाे दुई वर्ष भयो । उनी घरकाे काम आएकी हुन उनलाई अहिले घर मालिकले अहिले उनलाई बाहिर बस्न भनेर घर बाट निकालदिएको छ । किनकी उहाँलाई उहाँको साहुले कोरोना भाइरस नियन्त्रण भइसकेपछी आउनु भनिको छ । उनी पनि बाहिर दिदिबहिनीहरु संगै बस्दै आउनु भएको छ। अहिले उहाँलाई पनि गाँस बाँस र कपासकाे चिन्ता संगै साहुले काममा बोलाउछ कि बाेलाउदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलिएकी छिन ।
गोर्खा घर भएका सुदिप भन्छन, उनि साइप्रसमा बिद्यार्थी भिसामा आउनु भएको नौ महिना भयो । उनि अहिले सम्म साइप्रसमा काम नपाएर घर जान तरखरमा थिए र घर जानको लागि IMO फर्मको उत्तरको पर्खाइमा थिए, एका एक कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिए पछि उनी अहिले बन्द कोठामा छन । उनी जस्ता धेरै नेपाली विद्यार्थी रहेका छन । उनी अहिले कसरी बस्ने , घरभाडा आदि लगाएत कसरी तिर्ने हाेला भन्ने चिन्तामा छन।
सरोज भन्छन् ,सबै संघसंस्थाहरुलाई मेरो मात्र नभइ सबै विद्यार्थी साथीहरूको कुरा हाे । याे विपत्ति मा काम छैन घर भित्र बस्नु परेको छ , नबस्नु पनि कसरी याे आफै पनि बुझिबुझि बुझ् पचाउने कुरै भएन । त्यसपछि अर्को कुरा विद्यार्थीले भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ , फरकफरक इन्टेक मा आएका विद्यार्थी आफू आएको इन्टेक मा भर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ ,भर्ना गरेन भने कलेजले भिसा रिन्यु गर्दैन , भिसा रिन्यु भएन भने इलिगल हुन्छ, इलिगल मान्छे एक अपराधी सरह हुन्छ । इलिगल भएकाे भेटाउने बित्तिकै यहाँको सरकारले नेपाल पठाइदिन्छ । यदि यस्तो अबस्थामा पैसा नभएर भर्ना गर्न सकिएन भने नेपाल फर्किने हाेकी भन्ने म जस्ता धेरै विद्यार्थीको चासो र चिन्ताकाे विषय बनेको छ । नेपाल सरकार मार्फत यहाँ रहेका विद्यार्थीका लागि साइप्रस सरकारलाई घर भाडा र कलेज फि काे लागि राहत प्याकेज ल्याउने वातावरण मिलाइदिन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
विद्यार्थीलाई भाडा, बिजुली, पानी जस्ता सरकारी बिल तिर्न धेरै गार्‍हो भएको छ । म सबै संघसंस्थालाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु । तपाईंहरुले पीडित विद्यार्थीलाई राहत वितरण गर्दैहुनुहुन्छ, त्यसको लागि लाखौंलाख धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईंले दिएको राहतले केही दिन भाेक टार्न सकिएला तर घर भाडाले गर्दा धेरै जना विचलित छन । याे महामारीको अबस्थामा घर भाडा तिर्न सकिएन भने घर धनिले बाहिर निकालिदिन्छ । घरबाट निकाल्यो भने के गर्ने हाेला कहाँ जाने हाेला यहीँ कुराले दिन प्रतिदिन विद्यार्थीका मन पिरोलिएका छन ।
विश्वभरि लकडाउन चलिरहेको बेला राेडमा जाम पुलिसले फाइन हान्ने डर छ घरमा बस्नलाई भाडा तिर्न नसकेर घर मालिकले निकालिदिएकाे छ कहाँ जाने भन्ने कुराले अन्याेलमा परेकम छन ।
सम्पूर्ण संघसंस्थाहरुलाई मेरो आग्रह हामी विद्यार्थीको घर भाडाको कुरालाई एकपटक गम्भीरतापूर्वक साेच्नु पर्ने बेला आएको छ । एन आर एन ए साइप्रस लगाएत सम्पूर्ण संस्थामार्फत हाम्रो हाेनरी कन्सुलर निकाेसिया र नेपाली राजदुतावास इजरायल लाई जानकारी गराएर नेपाल सरकार मार्फत साइप्रसमा रहेका विद्यार्थीको लागि केही महिनाको लागि घर भाडामा राहत प्याकेज र भिसा रिन्यु गर्न कलेजमा समेत राहत प्याकेज काे वातावरण सृजना गर्न पहल गरिदिनु हुन्थ्यो कि? उहाँ जस्ता धेरै विद्यार्थीको चिन्ताको बिषय हो ।
सबै सस्थाहरु एक जुट भएर विद्यार्थीको समस्या समाधानको लागि राहत वितरण गर्नु भएको छ । यो एकदमै सर्हानीय काम हो । हाम्रो आशा छ अब आउने दिनहरुमा सबै सस्थाले यो एक भएर आवाज उठाउनु हुन्छ भन्ने म जस्ता हजारौं विद्यार्थीले आशा राखेका छौ।
लेखक : कृप थापा
त्यसैले कोरोनाको रोकथाम र यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न हाम्रा सबै सार्वजनिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, तिनमा कार्यरत कर्मचारी र सबै सचेत नागरिकहरुले आ–आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वभाविक रुपमा पुराना र भर्खरै साइप्रस पढ्न आएका विद्यार्थीलाई लगभग चार हजारको हाराहारी मा विभिन्न कलेज र क्षेत्रमा रहेका छन । कोरोना भाइरसले नेपाली विद्यार्थी संकटमा पर्न गएका छन । काेराेना भाइरसकाे प्रत्यक्ष मारमा पर्न गएकम छन ।
यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद साइप्रस संगै सहकार्य गरेका संघ र संस्थाहरुको अति जोखिममा परेका विद्यार्थीलाई राहत प्याकेज वितरण गर्न गइरहेको छ ।कोरोना भाइरसले यस्तै रुप लियो भने आउने दिनहरुमा यस्को निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले सबै म जस्ता आम विद्यार्थीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ ।
साइप्रसमा रहुनु हुने विद्यार्थीको लागि होस वा कामदारमा आउने समस्याको बारेमा यहाँका निकायहरु र नेपाल सरकार चिन्तन नदेख्दा आम सबै नेपाली चिन्ताले पिरोलिएका छौ। किनकि यति खेर नेपाल सरकारको आफ्ना नागरिककाे उत्तिकै चिन्ता र चासोको विषय हो । आज साइप्रसमा गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद साइप्रस र केही संघ संस्थाले साइप्रसमा रहेका विद्यार्थी समस्याको बारे साइप्रसमा भएका संघ संस्थाले विषयबस्तुहरु उठान गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने , कहिने सम्म संघसंगठनले आवजहरु उठाउने ? नेपाल सरकारको नजर साइप्रसमा रहेका नेपाली नागरिक तर्फ चासो जावस सरकार ।
अहिले गाँसको समस्या आइसकेको छ भने जुन समस्या को समाधानको लागि विभिन्न सस्थाले दिदै छ भने आउने दिनहरुमा कस्तो रुपलिन सकिन्छ भन्ने चिन्ताको बिसय हो । अब यस्तै हो भने विद्यार्थी दाजुभाई दिदिबहिनीहरुले भाडा , बिजुली बिल र पानीको बिल साइप्रस सरकारलाई कसरी तिर्नु हुन्छ र?जुन हामी मध्यम बर्ग विद्यार्थी पढ्न र रोजगार गरेर सुनौला सपना बुनेर आएका छौ । त्यहा माथी साहूकाे लोन र चर्खो ब्याज माथी विद्यार्थीहरु चपटेमा परेका छन । साइप्रसमा पार्ट टाइम जागिर गरेर गाँस, बाँस र कपास जोहो तोहो गरेका थिए त्यही पनि काेराेना भाइरसले खाेसिदिएकाे छ ।
साइप्रसमा बिद्यार्थीहरुको समस्या कलेज सुल्क कम , भिसा सकेका र नेपाल छुट्टीमा घर गएका विद्यार्थीहरु आउने वातावरण, नेपाल सरकार र संघसंगठनकाले साइप्रस सरकार संग परामर्श गरेर यो महामारी अवस्था घरको बहालमा छुट वा एक दुई महिनाको घरभाडा नलिन , घर जान चाहाने विद्यार्थी को लागि घर जाने ब्यबस्था गर्न नेपाल सरकारको आफ्नो नागरिक माथि ध्यान जाहोस।
साइप्रसमा नेपाल कन्सुलेट स्थापना भएको एक दसक भन्दा बढी भइसकेको छ र साइप्रस हेर्नको लागि इजरायल राजदुतावासलाई पनि साइप्रसमा कति विद्यार्थी कति छन् एकिन डाटा समेत अवगत छैन्न ,नेपालीहरू कहा कति बसोबास गरेका छन् दूताबाससँग कुनै एकिन डाटा नहुनु लज्जाको विषय बनेको छ । जब भयो राति तब बुढी ताती भनेझै कोरोना भाइरसकाे माहामारी रुप नेपाली समुदायमा छिरेपछी नेपाली राजदुतावास इजरायलले नेपालीको तथ्यांक लिन तम्सिएकाे देख्दा खुसि पनि छौ र दुखि पनि छौ । किन दुखि छौ भन्दा डाटा पहिले देखि नै लिदै आउनुपर्ने हाे जब आवश्यक पर्छ तब लिनु याे दुखकाे कुरा हाे । अर्कोतर्फ खुसि काे कुरा पनि छ याे डाटा लिदै गर्दा साइप्रसमा रहेका नेपाली समुदायको लागि केही सक्रिय बन्दैछ भन्ने आशाकाे दियो बलेको छ । अब साइप्रसमा रहेका नेपाली समुदायका पिर मर्का सुन्दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ । याे आशा र भराेसा नटुटाेस । यो कार्यलाई धन्यवाद दिनु पर्छ।
विश्वमा काेराेना भाइरसले महामारीको रुप लिइरहदा साइप्रसमा पनि यसको प्रभाव धेरै नै छ त्यसैले याे काेराेना भाइरस बाट बच्ने एउटामात्र उपाय घरमा बस्ने कुनैपनि मान्छेकाे सम्पर्कमा नजानु नै हाे । जाे जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ ठाउँमा बँसौ आफू बाँचौ र अरुलाई पनि बचाउ ।
प्रवास, ब्यानर न्यूज, ब्लग